Dhiiga daatay imisaa lacag laga samayn karaa? | allsanaag
Dhiiga daatay imisaa lacag laga samayn karaa?
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, oo maalmahan siyaasi kasta oo ka soo jeeda Maakhir oo kala hadla xasuuqii ka dhacay Buuraha Calmadow ugu jawaabayey ” wax badan ma jiraane yaan arinta loo buun buunin. Taasina ay abuurtay shaki weyn, ayaa hadda Guddi soo qiimeeya wixii ka dhacay buuraha Calmadow magcaabay.
Guddigan ayaa ka kooban shan wasiir o ka soo jeeda beesha Majeerteen, oo mid ka mid ah ay heshiin waayeen wasiir ku xigeenkiisii oo gabar ahayd oo ka soo jeeday Gobolka Sanaag. Markii danbena gabadhii laga bedelay wasaaradaas
Wasiirka hogaaminaya, guddigan soo qiimaynaysa wixii ka dhacay Buuraha Calmadow, waa wasiirkii warbaahinta ka sheegay ” in ayna wax badan buuraha Calmadow ka dhicin ee halkaa lagu dilay Caruur iyo Dumar oo qura
← Isbedalka Amni ee Muqdisho Meet three UAE expats who converted to Islam →